Xogta Wareejinta ee Taleefanka ee Huawei Phone iyo Faylasha Smartphone-ka Cusub 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ma iibsatay nooc casri ah oo casri ah iminkana ma jeclaan lahayd inaad ka soo wareejiso dhammaan xogtaada moobaylkii hore oo aad u beddesho midkaaga cusub? Xalku waa Qalabka taleefanka ee Huawei, codsi ay soo saartay shirkadda caanka ah ee Shiinaha, oo dhameystiran, iskudhufnaan badan oo sidaas awgeed la jaan qaada labada Android iyo iPhone.
Codsigan ayaa aad ugu habboon kuwa ka soo wareegaya iPhone-ka uguna beddelaya casriga casriga ah ee 'Android' iyo, wixii ka sarreeya, kuwa u beddelaya taleefankooda Huawei nooc kale (tan iyo markii maanta taleefannada Huawei ay si dhab ah u iibiyaan wax ka yar muddo ka hor).
AKHRISO:Bedelka xogta ka mid Android mobile in kale si toos ah
cunt Qalabka taleefanka ee Huawei Waa macquul:
wareejinta xogta ka iPhone/iPad casriga ah Huawei iyo taa lidkeed;
wareejinta xogta ka iPhone/iPad casriga ah Android iyo taa lidkeed;
wareejinta xogta ka casriga ah Android casriga ah Huawei iyo taa lidkeed;
wareejinta xogta u dhaxeysa taleefannada casriga ah Huawei.
Faylasha iyo xogta la gudbin karo
yo xogta kaas oo lagu gudbin karo Telefoon waa sida soo socota:
Sababo amni awgood oo ay soo rogeen Android waxaa jira xog maya waa la wareejin karaa:
xogta laga helo barnaamijyada sida WhatsApp;
xogta ku jirta daruuraha: tusaale ahaan, sawirro lagu keydiyay Sawirada Google;
Sida loo wareejiyo xogta leh Qalabka Taleefoonka
1) Marka hore waxaad u baahan tahay inaad rakibto barnaamijka bilaashka ah Telefoon labada qalabba. Haddii taleefannada casriga ahi labadaba yihiin Huawei waxaad ka heli doontaa arjiga horay loo rakibay.
2) Marka barnaamijka la soo dejiyo, waa in laga furaa labada qalab oo la gujiyaa "In la aqbalo" Hoose hoose;
3) Labada qalab, xaqiijin inaad awood u yeelato inaad hesho xogtaada;
4) Markaad ogolaansho ka bixiso casrigaagii hore, kaamirada ayaa furi doonta iyadoo ku weydiineysa inaad qaabeyso a QR codehalka casriga cusub ee aad dooran doontid nooca taleefan ee hore u dhexeeya "Huawei", "Android kale", "iPhome / iPad". Xulo midka saxda ah iyo QR code.
5) Iyada oo taleefankii hore ee casriga ahaa, lagu qaabeeyey QR code: halkan laga bilaabo isku dayga isku xidhka labada aaladood ayaa bilaabmi doona, markaa xaqiijin isku xidhka isticmaalaha iyada oo loo marayo daaqad pop-up ah.
6) Hadda waxaad tilmaami kartaa feylasha laga wareejiyo taleefankii hore ee casriga ahaa "Soo muuqashadakuwa xiisaha kuu leh
7) Saxaafad "Xaqiijin" iyo nidaamka socdaalka xogta si toos ah ayuu u bilaaban doonaa.
Wareejinta xogta waxaa lagu fuliyaa isku xirka nooca Wifi abuuray tan u dhexeeya labada aaladood: sidan ayaa hawshu noqon doontaa amniga mi soomi.
Haddii aad hayso xog badan, hijrada ayaa laga yaabaa inay qaadato dhowr daqiiqo, laakiin tilmaame waqtiga haray ayaa wali ka muuqan doona shaashadda. Haddii xiriirka ka dhexeeya taleefannada casriga ah la joojiyo, hawsha ayaa dib loo soo celin doonaa oo wareejinta ayaa dib uga bilaaban doonta meeshii ay ku joogsatay.
AKHRISO: Bedelka ka Android inay iPhone iyo wareejiso dhammaan xogta